Nhau - Chirevo chinoratidzawo muna 2020, apo denda rakaputika nepakati pechikamu, 844,000 Ekufamba & Tourism mabasa akarasika munyika yose.
Tsvagiridzo yakaitwa neWorld Travel & Tourism Council (WTTC) yakaratidza kuti hupfumi hweEgypt hunogona kutarisana nekurasikirwa kwezuva nezuva kweanodarika EGP 31 miriyoni kana ikaramba iri parwendo rweUK 'red list'.
Zvichienderana nemazinga a2019, chimiro cheEgypt senyika yeUK 'red list' ichaisa njodzi kune nyika iri kunetsekana yeKufamba & Tourism uye hupfumi hwese hunoyambira WTTC.
Zvinoenderana nenhamba yepre-denda, vashanyi vekuUK vakamiririra zvikamu zvishanu muzana zvevose vanosvika kunze kwenyika muna 2019.
Iyo UK yaive zvakare yechitatu yakakura sosi musika weEgypt, ingori kuseri kweGermany neSaudi Arabia.
Nekudaro, tsvagiridzo yeWTTC inoratidza kuti zvirambidzo zve 'red list' zviri kutadzisa vafambi veku UK kushanyira Egypt.
WTTC - Economy Economy Inotarisana Nekurasikirwa Kwezuva Nezuva KweZvinopfuura EGP 31 Mamirioni Nekuda kweUK Red List Status
Boka rekushanya kwepasirese rinoti izvi zvakakonzerwa nekutya pamusoro pemitengo yakawedzerwa pakugariswa kwehotera kunodhura kwemazuva gumi pakusvika kuUK, uye bvunzo dzinodhura dzeCCIDID-10.
Hupfumi hweEgypt hunogona kutarisana nekudonhedza kweinopfuura EGP 237 miriyoni svondo rega rega, yakaenzana neinodarika EGP bhiriyoni imwe mwedzi wega wega.
Virginia Messina, Mutevedzeri weMutungamiriri Mukuru uye Anobata CEO WTTC, akati: "Zuva rega rega Egypt inogara paUK's 'red list', hupfumi hwenyika hwakatarisana nekurasikirwa nemamiriyoni nekushaikwa kwevashanyi vekuUK chete. Iyi mutemo inorambidza zvinoshamisa uye inokuvadza sezvo vafambi vanobva kuEgypt vakatarisanawo nevekuvharirwa mumahotera nemubhadharo wakakura.
"Sarudzo yehurumende yeUK yekuwedzera Egypt ku" runyorwa rutsvuku" ine simba guru kwete pahupfumi hwenyika chete, asiwo zviuru zvevaIjipitawo zvavo vanovimba nechikamu chiri kubudirira cheKufamba & Kushanya kuti vawane raramo.
“Kuburitswa kwejekiseni rekuUK kwakaratidza kubudirira zvikuru nevanopfuura zvikamu zvitatu muzvina zvevanhu vakuru vakabayiwa zvakapetwa kaviri, uye 59% yehuwandu hwevanhu vakabayiwa zvizere. Mukana wekuti chero munhu aienda kuEjipitori angave akazara jekiseni uye nekudaro anoisa diki njodzi.
"Ruzivo rwedu runoratidza kukosha kweKufamba & Kushanya kunyika, uye zvakakosha sei kuti hurumende yeEgypt iwedzere kuburitswa kwegomarara kana ichizowana mukana wekudzoreredza chikamu chakakosha ichi, icho chakakosha kuhupfumi hwenyika. kupora."
Tsvagiridzo yeWTTC inoratidza mabatiro anoshamisa eCCIDID-19 pachikamu cheEgypt Travel & Tourism, nerupiro rwayo kuGDP yenyika inodonha kubva paEGP 505 bhiriyoni (8.8%) muna 2019, kusvika paEGP 227.5 bhiriyoni (3.8%) muna 2020.